Mgbasa ụlọ nkwari akụ ọdịda anyanwụ Afrịka: Nigeria, Cote d'Ivoire, Cape Verde na-eduga
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Na -eme Nigeria » Mgbasa ụlọ nkwari akụ ọdịda anyanwụ Afrịka: Nigeria, Cote d'Ivoire, Cape Verde na-eduga
Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • Akụkọ Na -eme Nigeria • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Naịjirịa nwere ọnọdụ ya maka mmepe ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ na West Africa n'agbanyeghị ntakịrị mbelata na afọ gara aga, dị ka otu nyocha pipeline nkwari akụ na-enwe kwa afọ.
Nkọwapụta nke nyocha a gbasara Africa dum, ga-abụ otu n'ime mkparịta ụka dị mkpa na ọgbakọ na-abịa n'ihu na Kenya.
Nigeria, ibu nke Africa, nwere paịpụ kacha ibu na West Africa (na nke abụọ kachasị na kọntinent ahụ), na itinye uche ya dị na Lagos na Abuja, isi obodo azụmahịa na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Agbanyeghị, enwere ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke mbinye aka na obodo ndị ọzọ, dịka Enugu, Port Harcourt, Onitsha na Benin City. Usoro ije ahịa na Naịjirịa ejiri nwayọ nwayọ nwayọ, yana naanị azụmaahịa 2 bịanyere aka na 6 ma e jiri ya tụnyere 2017 na 10 na 2015, ngosipụta nke ọnọdụ akụ na ụba na mba ahụ. Mmepe pipeline nke ụlọ oriri na nkwakọba ọnụ na ọnụ ụlọ zuru ezu e mere maka Naịjirịa agbadata 2016% n'afọ gara aga, mana ọ ka nwere ọnụ ụlọ 5.1 n'ezie na-ewu, n'ime ngụkọta nke 4,146 na họtel 9,603.
Cote d'Ivoire emegoro nke ọma, na-abanye mba ise kachasị na mba ọdịda anyanwụ Afrịka nwere ụlọ oriri ọhụrụ 10 na paịpụ, mmụba 205.7% n'afọ gara aga - 549 nke ọnụ ụlọ 1,830 nọ na saịtị ahụ. Hotelslọ nkwari akụ niile a na-eme atụmatụ nọ na Abidjan, nke ọtụtụ azụmahịa nke AccorHotels na Marriott bịanyere aka na ya. Nke a gosipụtara obi ike na mba ahụ dị ka nloghachi na ọchịchị onye kwuo uche ya, mgbe ọtụtụ afọ nke agha obodo, wetaworo nkwụsi ike akụ na ụba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na IMF na-ebu amụma mmụba GDP nke 7.4% afọ a, otu n'ime ndị kachasị elu na kọntinent ahụ.
Cape Verde na-akwado ụlọ na ụlọ 2,710 ugbu a na saịtị, elu 15.3% na afọ gara aga. Sao Vincente bụ 28% nke paịpụ mmanụ nke mba ahụ. Ihe ndị ọzọ dị na Boa Vista, Mindelo, Praia, Sal na Santiago.
Senegal, nwere ụlọ oriri na nkwari akụ iri na asaa nọ na paịpepe bụ onye ọzọ na-arụ ọrụ ike, ihe ruru pasent 17% n'afọ gara aga maka ụlọ - 16.2% nọ na Dakar. Ndị fọdụrụnụ nọ na Cap Skirring na Mbour.
Marriott ka na-ahụ maka agbụ na mpaghara ahụ - ụlọ nkwari akụ ezubere maka 26 nke nwere ọnụ ụlọ 5,354, ihe dịka 25% na afọ gara aga. Louvre na - ebugharị - ụlọ nkwari akụ asaa nwere ọnụ ụlọ 807, mmụba 83%.
Na ngụkọta, agbụ ndị ahụ na-egosi mmụba 10% na 2017 na ụlọ 22,680 pipeline na West Africa.
Nkwupụta pipeline nke afọ a, ugbu a na 10th mbipụta, nwere ndị nyere onyinye 41, na -ekwu banyere azụmahịa 418 metụtara ihe karịrị ụdị 100 gafee Africa. Arụ ọrụ kwa afọ maka Africa n'ozuzu na 2018 na-egosi uto, mana ọ na-ada ụda karịa na afọ ndị na - adịbeghị anya - 25% mmụba n'ọnụ ọgụgụ ọnụ ụlọ pipeline na 2015; 19% na 2016, na 13% na 2017, nke ukwuu dika 13.5 pasent na 2018.
Isi mmalite: Tarsh Consulting